Kutheni ukhetha thina? -Chengdu Action Electronics Joint-Stock Co., Ltd.
● I-Hi-Tech Manufacturing Equipment
Izixhobo zethu zokuvelisa ezingundoqo zingeniswa ngqo eJapan (Panasonic kunye ne-Omron) kunye neJamani (KUKA).
● Amandla e-R&D awomeleleyo
Ekupheleni kuka-2020, i-Action inamalungelo okushicilela angama-58, amalungelo awodwa omenzi wechiza angama-55.
Sineenjineli ezingama-37 kwiziko lethu le-R&D, zonke zineziDanga zesidanga okanye ngaphezulu zisuka kwiYunivesithi yeNzululwazi yoMbane nobuNjineli baseTshayina.
● Utshintshiselwano neNtsebenziswano
Ukusebenza kwabasebenzi beMetroloji yeSizwe kunye nesiseko soqeqesho.Elinye lamashishini adumileyo angama-20 kwintsimi yeteknoloji ye-IoT yaseTshayina.Iziko lophando lobunjineli bobunjineli baseChengdu.Singababoneleli bebakala lokuqala le-CNPC, iSinopec, i-CNOOC, njl.
● OEM & ODM Yamkelekile
Ilogo eyenzelwe wena, ubungakanani kunye neemilo ziyafumaneka.Wamkelekile ukwabelana nathi ngombono wakho, masisebenze kunye ukwenza ubomi bube nobuchule ngakumbi.
● Inkxaso yabahambisi
Samkela abasasazi abavela kwihlabathi liphela ukuba basijoyine kwaye babonelele ngenkxaso yobugcisa.
● ULawulo loMgangatho olungqongqo
● I-1.Core Raw Material.
Amacandelo ethu angundoqo: izinzwa zingeniswa ngokuthe ngqo ukusuka eJapan, e-UK, eSwitzerland naseJamani, njl..
● 2. Inkqubo yolawulo lomgangatho wenzululwazi
Ukususela ekusekweni kwemigangatho yomgangatho ukuya kulawulo lomgangatho womboneleli; ukusuka kuyilo kunye nophuhliso ukukhawulela uvavanyo kwilabhoratri, ukulungelelanisa umgangatho wemveliso nganye kunye nedatha echanekileyo;
● 3. Ukwamkela inkqubo yolawulo lwengcaciso epheleleyo
Thatha ukhokelo ekwamkeleni inkqubo yokwenziwa komzi-mveliso ephucukileyo (MES: Inkqubo yesiGqeba sokuVelisa) kushishino.Ukuqondwa ukusuka ekuthengeni izinto eziphathekayo ukuya kwimveliso yemveliso, ukusuka ekuhlolweni ukuya kwimveliso yokugqibela, inyathelo ngalinye lokuhanjiswa linokulandelwa ngokuchanekileyo.Kwaye inkqubo yedatha yexesha langempela lokuphucula ulawulo lomgangatho kunye nolawulo lwemveliso;
● 4. Inkqubo yokuvelisa ngokuzenzekelayo
Gqibezela umgca wemveliso ngokuzenzekelayo, inkqubo yokuguga ngokuzenzekelayo, inkqubo yokusabalalisa igesi ngokuzenzekelayo, inkqubo yokulinganisa i-calibration ye-industrial ehamba phambili, imigangatho yokufumanisa echanekileyo ukuya kwinqanaba le-micron.
● 5. Uvavanyo lweeMveliso ezigqityiweyo
IAlam yerhasi etshayo, umtshini wegesi onokutsha, isixhobo segesi, China Gas Detector, Isikhangeli segesi se-lpg, umtshini wegesi osisigxina,